Wasaarada Amniga oo amar ka soo saartay ciidanka shacabka dilk... | Universal Somali TV
Wasaarada Amniga oo amar ka soo saartay ciidanka shacabka dilka u geysta
January 09 2017 07:21:11
Wasaaradda amniga ee Dowladda Federaalka Somaliya ayaa war ka soo saartay ciidamada hubeysan ee waddooyinka Muqdisho sida bareerka ah ugu dila dadka shacabka ah.
Warkan ay soo saartay wasaaradda amniga ayaa daba socday kadib markii maalmihii la soo dhaafay magaalada Muqdisho si bareer ah ciidamo ka tirsan dowladda ugu dileen wadayaal Mooto oo aanan waxba galabsan.
Afhayeenka Wasaarada Amniga Gudaha C/kaamil Macalin Shukri oo ka hadlay arinta ku aadan ciidamada dilka u geysta shacabka ayaa wuxuu yiri.
“Waxaad arkaysaa qof isku ekaysiinaya shacabkii baabuur raaxa ah wata oo hadana geysanaya falal dhibaato ah markaa waxaa laga yaabaa ciidanka iyagoo ka taxadaraya dadkaas iney xadgudub sameeyaan waa suurogal, wax la ogolyahayna maaha sharcigaa la mariyaa haddii ay dhacdo oo ay si toos ah noosoo gaarto, askarigii geystana waa lala xisaabtamaa”.
Kan-xigaShabaab oo ugaarsiga iyo ka ganacsiga...
Kan-horeMadaxweynaha Galmudug: Ma haboona Baa...
34,195,774 unique visits